सिरहामा ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाईँदै
सिरहा, १३ असार। सिरहामा ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई आईतबारबाट कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाले असार १२ गतेदेखि १७ गते सम्म दुई चरणमा पालिकाले तोकेको विद्यालय वा खोप केन्द्रहरुमा दुई चरणका खोप लगाउन सुरु गरीएको हो। पहिलो चरण असार १२ गते १४ गतेसम्म गोलबजार, नगढीमाई, सुखिपुर नगरपालिका, अर्नमा, औरही, भगवानपुर, वडियारपट्टी, नगवाराजपुर र लक्ष्मीपुर पतारी गाउँ पालिकामा खोप केन्द्र सञ्चालन भईरहेको स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाका प्रमुख कृष्णदेव यादवले जानकारी दिए। त्यसैगरी दोस्रो चरण असार १५देखि १७ गतेसम्म सिरहा, लहान, कल्याणपुर, मिर्चैया नगरपालिका र नरह
काठमाडौं, ९ असार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई आजबाट कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले पायक पर्ने विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकेर दुई चरणमा बालबालिकालाई खोप दिन लागेको बताए। पहिलो चरणमा आजदेखि १५ गतेसम्म २७ जिल्लामा खोपको पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा साउन २ देखि ८ गतेसम्ममा दिइने छ। त्यस्तै, बाँकी रहेको ५० जिल्लामा भदौ ५ देखि ११ गतेसम्म पहिलो मात्रा र भदौ २७ देखि असोज १ गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप अभियान सञ्चालन हुने जनाएको छ। पहिलो चरणमा वाग्मती प्रदेशका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, चितवन
सागर बुढाथोकी नेपालमा अपवाद बाहेक अधिकांश जटिल रोगका विशिष्टीकृत सेवाका लागि दरबन्दी नै छैन। सरकारको यही नीतिका कारण एकातिर विशेषज्ञ जनशक्तिको उत्पादन कम हुँदा नयाँ रोग पहिचान र उपचारमा सकस छ अर्कोतिर, विदेशबाट पढाइ सकेर फर्किएका चिकित्सक फेरि विदेश फर्कन थालेका छन्। रक्त सञ्चार केन्द्रले रगत संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणको काम गर्छ। तर केन्द्रले गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा संक्रमण तथा अंगभंगका घटना भइरहेका छन्। रक्त सञ्चार केन्द्रको लापरबाहीको कारण ६ असार २०७४ मा थालासेमियाको उपचारका लागि रगत चढाइएका एक किशोर एचआईभी संक्रमित हुन पुगे। दक्ष जनशक्तिको अ
आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस: सिरहा सहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै
काठमाडौं, ७ असार। आज विश्व योग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यसवर्ष ‘मानवताका लागि योग’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् २०१५ देखि हरेक वर्षको जुन २१ तारिखमा विश्वभर योग दिवस मनाउन थालिएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ६९औँ महासभामा योग सबैका लागि सधैँका लागि आवश्यक भएकाले दिवसको घोषणा गर्न पहिलो पटक प्रस्ताव गरेका थिए। यो प्रस्तावमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले पहिलो समर्थन गरेपछि युरोपियन युनियनलगायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घका स्थायी सदस्य देशले समर्थन गरेका थिए। नेपालमा २०४८
११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाइँदै
ललितपुर, असार ५ । ललितपुरमा ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको फाइजर बायोएनटेकको पहिलो खोप लगाइने भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई असार ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म सो खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागको हो। स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख डा. सतिश विष्टका अनुसार जिल्लाका ६ वटै पालिकामा खोप कार्यक्रम एकैदिन सुरु हुनेछ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले साउन २ गतेदेखि ८ गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप कार्यक्रम सन्चालन गर्ने जानकारी दिए। खोप कार्यक्रमको लाग
विदेशबाट आएका एक व्यक्तिमा मङ्कीपक्सको आशङ्का, टेकु अस्पतालमा भर्ना
फाई लफोटो। काठमाडौं, २ असार। विदेशबाट काठमाडौं आंएका एक व्यक्तिमा मङ्कीपक्सका बिरामी रहेको आशंकामा काठमाडौंको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा भर्ना भएका छन्। दुबईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका ती शङ्कास्पद पुरुषलाई त्यहाँको हेल्थ डेक्सले सिधै टेकु अस्पताल पठाएको हो। ती पुरुषमा मङ्कीपक्ससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको तर पूर्ण परीक्षणबाट आउने नतिजाबाट मात्रै मङ्कीपक्सको सङ्क्रमण हो या होइन भनेर पुुष्टि गर्न सकिने अस्पतालका सूचना अधिकृत नवराज गौतमले जानकारी दिए। मङ्कीपक्स सङ्क्रमण भएपछि ठेउलाको जस्तो डाबर देखिन्छ। सङ्क्रमित व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आउने अरूम
सिरहामा चट्याङ्ग लोगेर एकको मृत्यु, एक घाइते
सिरहा, २५ जेष्ठ। सिरहामा चट्याङ्ग लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ, भने एकजना घाइते भएका छन्। जिल्लाको धनगढीमाई नपा १३ भाल्टरका ४० वर्षिय बुद्ध बहादुर तामाङ्गको चट्याङका कारण मृत्यु भएको हो। घरमै बसिरहेका उनको आज विहान हावा, हुरी, पानी सँगै परेका चट्याङ्ले उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका सूचना अधिकारी डीएसपी सुवास बुढाथोकीले जानकारी दिए। चट्याङ लागेर वेहास भएका उनलाई उपचारको लागि धनगढीमाई नपा ९ स्थित आरके मेरीसीटी अस्पताल ल्याएपनि अस्पतालले तत्काल मृत घोषणा गरेको थियो। उनको शरिर बाहिरीभागमा भने कुनै घाउचोट नदेखिएको अस्पतालले जनाएको छ। त्यसैगरी, मिर्चैया नपा ९ देउरालीका ५६ कुम
1,382 पटक पढिएको
सिरहामा भोलीबाट सुरुहुँदै टाईफाईड विरुद्धको खोप, २ लाख ४५ हजार बाल–बालिकालाई खोप लाउने
सिरहा, २४ चैत । सिरहामा करिव अढाईलाख बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप दिईने भएको छ । भोली चौत २५ गतेबाट सुरु हुन लागेको टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानमा जिल्लाका २ लाख ४५ हजार ८३ जना १५ महिना देखि १५ वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरु सहभागी हुने भएको हो । सिरहामा दुई चरणमा हुन लागेको खोप अभियानमा एक हजार १० खोप केन्द्र रहने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । खोप कार्यक्रमलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन खोप लाउने ४ सय ३२ जना स्वास्थ्यकर्मि र ८ सय ६४ जना स्वायम् सेवक परिचालन गरेको स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाका निमित्त प्रमुख कृष्णदेव यादवले जानकारी दिए । खोपमा खटिने सवै स्वास्थ्यकर्मि, स्वायम्सेवक तथा कर्मचारीहरु
प्रकाशित मितिः चैत्र २४, २०७८
काठमाडौं, १७ चौच । मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरुले अव औषधि उपचारका लागि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पाउने भएको छ । सरकारले औषधि उपचार बापत खर्च उपलव्ध गराउने कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेपछि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघात भएका बिरामीले औषधि उपचारका लागि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पाउने भएका हुन् ।गएको १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा देशभरका ७ सय ५३ पालिकाबाट यो रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । अब स्थानीय
प्रकाशित मितिः चैत्र १७, २०७८
वीरगञ्ज, १३ चैत । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा करिब ७ वर्षदेखि बन्द रहेको सिटिस्क्यान सेवा आइतवारदेखि पुनः सुचारु भएको छ । जनशक्ति अभावका कारण बन्द रहेका सिटिस्क्यान पुनः सेवा सूचारु भएको हो । नारायणी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट (मेसु) डा. बिरेन्द्र बहादुर प्रधानका अनुसार सिटि स्क्यान मेशिन सुचारुका लागि जनशक्तिको अभाव छ । यद्यपी ३ सिफ्टमा सञ्चालन गर्न ३ जना कर्मचारी आवश्यक भएपनि जनशक्तिको अभावमा एकै जना कर्मचारीको भरमा सेवा सुचारु भएको डा. प्रधानले बताए । अस्पतालमा ९ वटा सिटि स्क्यान मेशिन भएपनि ६ वटा मेशिन सुचारु अवस्थामा छन् । बिग्रिएका अन्य ३ वटा मेशिन पनि मर्मत कार्य भईरहेको